Maxay tahay in kooxaha Suuqgeynta iyo IT-ga ay wadaagaan mas'uuliyadaha amniga internetka | Martech Zone
Jimco, Janaayo 21, 2022 Jimco, Janaayo 21, 2022 Alexander García-Tobar
Faafida ayaa kordhisay baahida loo qabo in waax kasta oo ka tirsan hay'ad ay fiiro gaar ah u yeelato amniga internetka. Taasi macno ayay samaynaysaa, sax? Markasta oo aan u isticmaalno tignoolajiyadayada habraacyadayada iyo shaqa-maalmeedkeena, waa inta aan aad ugu nugulnahay jebinta. Laakin qaadashada dhaqamada amniga internetka ee ka wanaagsan waa in laga bilaabo kooxo suuqgeyn oo aqoon fiican u leh.
Nabadgelyada internetka ayaa caadi ahaan walaac ka ahayd Tignoolajiyada Macluumaadka (IT) hogaamiyayaasha, Saraakiisha Ammaanka ee Warfaafinta (CISO) iyo Saraakiisha Sare ee Tignoolajiyada (CTO) ama Madaxa WarfaafintaCIO). Kobaca qarxa ee dambiyada internetka ayaa — lama huraan ah - kor u qaaday ammaanka internetka oo ka sarreeya kan kaliya walaac IT. Ugu danbeyn, Maamulayaasha C-suite iyo guddiyadu uma arkaan khatarta internetka inay tahay 'dhibaatada IT' balse khatar ahaan u baahan in heer kasta wax laga qabto. Si si buuxda loola dagaallamo waxyeelada weerarka internetka ee guuleysta wuxuu u baahan yahay shirkaduhu inay ku daraan amniga internetka istiraatiijiyadooda maareynta khatarta guud.
Ilaalin buuxda, shirkaduhu waa inay isku dheelitiraan amniga, sirta iyo khibradaha macaamiisha. Laakin sidee ayay ururadu u gaadhi karaan dheelitirnaantan adag? Iyagoo ku dhiirigelinaya kooxahooda suuqgeyneed inay qaataan door firfircoon.
Waa maxay sababta ay tahay in suuqgeynayaashu u daneeyaan amniga internetka?
Magacaaga summadaadu waa sida sumcaddaada oo kale.
Waxay qaadataa 20 sano in la dhiso sumcad iyo shan daqiiqo si loo burburiyo.
Haddaba maxaa dhacaya marka dambiilayaasha internetka ay helaan macluumaadka iyo helitaanka ay u baahan yihiin si ay si guul leh ugu ekaysiiyaan shirkad, khiyaameeyaan macaamiisheeda, xogta xadaan, ama ka sii daran? Dhibaato halis ah oo shirkadda ah.
Ka fakar Ku dhawaad ​​100% ganacsiyadu waxay bishiiba mar u diraan macaamiishooda iimaylo suuqgeyneed. Doolar kasta oo suuqgeyneed ah oo la isticmaalo wuxuu arkayaa soo celinta maalgashiga (ROI) ee qiyaastii $36. Weerarada phishing-ka ee dhaawaca summadaha qofka waxay halis galiyaan guusha kanaalka suuq-geynta.
Nasiib darro, waa wax aad u fudud in khayaanada iyo jilayaasha xun ay iska dhigaan qof kale. Tiknoolajiyada ka hortagaysa xashiishadani waa qaan oo la heli karaa, laakiin korsashada ayaa ka maqan sababtoo ah mararka qaarkood way ku adag tahay hay'adda IT-ga inay muujiso ganacsiga cad ROI tallaabooyinka amniga ee guud ahaan ururka. Marka faa'iidooyinka halbeegyada sida BIMI iyo DMRC ay noqdaan kuwo aad u muuqda, suuqgeyntu iyo IT-ga waxay sawiri karaan sheeko wadaag ah oo soo jiidasho leh. Waxaa la joogaa waqtigii hab ka hufan amniga internetka, mid dumiya silos oo kordhiya wada shaqaynta ka dhaxaysa waaxyaha.
Way og tahay in DMRC ay muhiim u tahay ka ilaalinta ururada phishing iyo sumcad xumada balse ay u halgamayso sidii ay uga heli lahayd wax-ku-ool ah hirgelinta hoggaankeeda. Tilmaamayaasha Calaamadaha Aqoonsiga Fariinta (BIMI) ayaa soo socota, taasoo abuuraysa farxad waaxda suuq-geynta, taas oo doonaysa sababtoo ah waxay hagaajinaysaa heerarka furan. Shirkaddu waxay fulisaa DMRC iyo BIMI iyo voil! IT waxay gaartaa guul muuqata oo la taaban karo iyo suuqgeyntu waxay ROI ku helaysaa jab la taaban karo. Qof kastaa wuu guulaysta.
Wadashaqayntu Waa Furaha
Shaqaalaha intooda badani waxay u arkaan IT-ga, suuq-geyntooda iyo waaxahooda kale ee silos. Laakiin sida weerarrada internetka ay noqdaan kuwo aad u casrisan oo adag, habka fikirkani cidna ma faa'iido. Suuqgeeyayaashu waxay sidoo kale ku qasban yihiin inay caawiyaan ilaalinta xogta ururka iyo macaamiisha. Sababtoo ah waxay aad ugu xidhan yihiin kanaalada sida warbaahinta bulshada, xayaysiisyada iyo iimaylka, suuqgeynayaashu way isticmaalaan oo wadaagaan macluumaad aad u badan.
Dembiilayaasha internetka ee bilaabaya weerarrada injineernimada bulshada ayaa tan u isticmaala faa'iidooyinkooda. Waxay isticmaalaan iimaylka si ay u soo diraan codsiyo ama codsiyo been abuur ah. Marka la furo, iimayladan waxay ku dhacaan kombuyuutarrada suuqleyda leh malware. Kooxo badan oo suuqgeyneed ayaa sidoo kale la shaqeeya iibiyeyaasha dibadda ee kala duwan iyo aaladaha u baahan helitaanka ama isdhaafsiga macluumaadka ganacsiga sirta ah.
Iyo marka kooxaha suuq-geynta laga filayo inay muujiyaan kobaca ROI iyagoo wax badan samaynaya, waxay si joogto ah u raadinayaan tignoolajiyad cusub, cusub oo kordhisa wax soo saarka iyo hufnaanta. Laakiin horumarkan ayaa abuuri kara furin aan la qorshayn oo loogu talagalay weerarrada internetka. Waa sababta suuq-geeyayaasha iyo xirfadleyda IT-ga ay tahay inay ka baxaan siloskooda si ay isaga kaashadaan oo ay u hubiyaan in horumarinta suuqgeyntu aysan uga tagayn shirkadda inay u nuglaadaan khataraha amniga. CMOs iyo CISOs waa in ay xisaabiyaan xalalka ka hor dhaqangelintooda iyo tababar shaqaale suuqgeyneed si ay u aqoonsadaan ugana warbixiyaan khataraha amniga internetka.
Xirfadlayaasha IT-ga waa inay xoojiyaan xirfadlayaasha suuqgeynta si ay u noqdaan maamulayaasha amniga macluumaadka hababka ugu wanaagsan iyagoo isticmaalaya:
Xaqiijinta arrimo badan (Laamaha)
Maamulayaasha sirta ah ayaa jecel Dashlane or LassPass.
calaamad kali ah (SSO)
Qalab kale oo qiimo leh oo lagu daro xeeladaha amniga internetka ee suuqleyda? DMRC.
Qiimaha DMRC ee Kooxaha Suuqgeynta
Xaqiijinta Fariinta ku salaysan Domain-ka, Warbixinta iyo ku-dhaqanka waa heerka dahabka ee xaqiijinta iimaylka. Shirkadaha qaata DMRC ee Dhaqangelinta waxay dammaanad qaadayaan in kaliya hay'adaha la ansixiyay ay soo diri karaan iimaylo iyagoo magacooda ah.
Adigoo isticmaalaya DMRC (iyo borotokoolka hoose ee SPF iyo DKIM) si wax ku ool ah oo aad u hesho Dhaqangelinta, calaamaduhu waxay arkaan gaarsiinta iimaylka oo la hagaajiyay. DMRC at Enforcement waxay ka ilaalisaa haakarisku inay ku qaadaan raacitaanka bilaashka ah ee meelaha la ilaaliyo.
SPF ama DKIM midkoodna ma xaqiijin soodiraha ka dhanka ah "From:" goobta ay isticmaalayaashu arkaan. Siyaasadda lagu qeexay diiwaanka DMRC waxay xaqiijin kartaa inay jirto "is-waafajin" (ie ciyaar) inta u dhaxaysa ka muuqda: ciwaanka iyo midkood barta DKIM ee furaha ama soo diraha la xaqiijiyay ee SPF. Istaraatiijiyadani waxay ka hortagtaa dambiilayaasha internetka inay isticmaalaan boggaga been abuurka ah ee gudaha From: goob lagu nacasyo qaataha oo u oggolaada haakarisku inay u jiheeyaan isticmaalayaasha aan is ogayn meelaha aan la xidhiidhin ee ay gacanta ku hayaan.
Kooxaha suuqgeyntu waxay soo diraan iimaylo kaliya maaha inay beegsadaan macaamiisha mustaqbalka. Ugu dambeyntii, waxay rabaan iimayladaas in la furo oo lagu dhaqmo. Xaqiijinta DMRC waxay hubisaa in iimayladaas ay ku soo galaan sanduuqyada loogu talagalay. Calaamaduhu waxay xoojin karaan adkeysiga xitaa in ka badan iyagoo ku dara Tilmaamayaasha Calaamadaha ee Aqoonsiga Fariinta (BIMI).
BIMI waxay DMRC u beddeshaa ROI suuqgeyn la taaban karo
BIMI waa qalab ay tahay in suuqle kasta uu isticmaalo. BIMI waxay u ogolaataa suuqlayda inay summadahooda ku daraan iimaylada la ilaaliyo, taasoo la muujiyay inay kordhiso qiimaha furan 10% celcelis ahaan.
Marka la soo koobo, BIMI waxay faa'iido u tahay suuqgeyneyaasha. Waxay ku dhisan tahay tignoolajiyada xaqiijinta iimaylka ee xooggan - DMRC marka la fulinayo - iyo iskaashiga ka dhexeeya daneeyayaasha kala duwan oo ay ku jiraan suuqgeynta, IT iyo waaxaha sharciga.
Suuqgeeyayaashu waxay had iyo jeer ku tiirsan yihiin xariif, mawduucyo soo jiidasho leh si ay u qabtaan dareenka qaataha, laakiin BIMI, iimaylada isticmaalaya calaamada waxay noqdaan kuwo degdeg ah oo sahlan in la aqoonsado. Xitaa haddii macaamiishu aysan furin iimaylka, waxay arkaan astaanta. Sida summada oo la saaro funaanad, dhismo, ama wax kale, summada iimaylka ayaa isla markiiba wacaysa dareenka qaataha summada - horumar aan weligeed suurtogal ahayn ka hor iyada oo aan marka hore la furin farriinta. BIMI waxay ka caawisaa suuqlayda inay galaan sanduuqa wax-soo-saarka si dhakhso ah.
Valimail's DMRC Adeeg ahaan
Dhaqangelinta DMRC is wadada loo maro BIMI. Si loo maro dariiqan waxay u baahan tahay in la hubiyo in DNS si sax ah u xaqiijiyo dhammaan fariimaha la soo diray - hawsha waqti-qaadka ah ee ganacsiyada. Kaliya 15% shirkadaha ayaa si guul leh u dhammaystiray mashruucyadooda DMRC. Waa inay jirtaa waddo ka wanaagsan, sax? Waxaa jira!
Valimail Authenticate waxay bixisaa DMRC adeeg ahaan, oo ay ku jiraan:
Qaabeynta tooska ah ee DNS
Aqoonsiga soo diraha caqliga leh
Liis hawleed fudud oo la raaco oo ka caawiya isticmaalayaasha inay gaadhaan dhaq-dhaqaaqa DMRC ee socda
Xaqiijinta DMARC™ waxay ka qaadaa halista bixinta DNS. Muuqaalkeeda oo dhammaystiran waxay u oggolaanaysaa shirkadaha inay arkaan cidda iimaylka u soo diraysa iyaga oo metelaya. Socod-shaqo oo la hago, otomaatig ah ayaa isticmaalayaasha ku dhex mara hawl kasta si ay u habeeyaan adeegyada iyada oo aan loo baahnayn aqoon qoto dheer, farsamo ama qandaraas khibrad ka baxsan. Ugu dambayntii, falanqaynta macnaha guud waxa ay caawisaa in la ansixiyo talooyinka otomaatiga ah - iyo digniinuhu waxa ay ka dhigayaan isticmaalayaasha casriga ah.
Waaxaha suuqgeyntu kuma noolaan karaan silos, oo laga magan galiyo welwelka amniga internetka, mar dambe. Sababtoo ah iyaga ayaa aad loo heli karo iyada oo ay ugu wacan tahay joogitaanka weyn ee Twitter, LinkedIn iyo aaladaha kale ee warbaahinta bulshada, haakarisku waxay u arkaan bartilmaameedyo fudud oo laga faa'iidaysan karo. Sida ururadu u aqoonsan yihiin qiimaha abuuritaanka dhaqanka wacyiga amniga internetka, waa inay ku martiqaadaan kooxahooda suuqgeyneed si ay ugala kaashadaan miiska maaraynta khatarta kooxaha IT iyo CISO.
Isku day Valimail
Daah-: Martech Zone wuxuu ku daray xiriiriyeyaasha xiriirka ee maqaalkan.
Tags: BIMIafduubka summadacisoctoweerarada internetkadambiyadainternetkaDMRCxaqiijinta emaylkaEmail Marketingsumcadda emailkamaareynta sumcadda emaylkaaqoonsi badan oo badanphishingsumcadgaraacid
Hal-abuure ganacsi oo taxane ah iyo fulinta caalami ah, Alexander waxa uu maamule ka ahaa laba shirkadood oo hore waxana uu u maamulay kooxo iib ah oo caalami ah saddex shirkadood oo tagay IPO. Waxa uu qabtay falanqeeye iyo jagooyin fulineed shirkadaha cilmi-baarista ee hormuudka ka ah sida Kooxda La-talinta Boston iyo Forrester Research oo ay weheliso bilawga Silicon Valley sida ValiCert, Sygate, iyo SyncTV.